Maaltu Akka Namoonni Hamaa ta’an Taasisa? -
By Melody Sundberg | Original in English published February 26, 2016
May 9 (untold stories online) — Dararri gochaa hacuuccaa ykn cunqursaan walqabate dha. Akkaataan itti raawwatamuu fi sababni itti raawwatamu adda ta’us, waan tokko garuu ifa dha. Innis, nama dararuun gochaa hamaa bali’aanaan raawwatamuu yeroo ta’u, namoonni hedduunis gochaa hamaa kanaaf ni saaxilamu.
Kanaan dura barreeffamoonni sarbamuu mirga dhala namaa biyya Itoophiyaa irratti xiyyeefatan marsariitii ‘Untold Stories’ irratti maxxanfamaa turaniiru. Gaafan jalqaba, odeeffanoo namoota mirgi isaanii sarbamanii dhagahu, dararaan yakka hojjatteetta jedhanii amansiisuun qaama tokko akka ta’e hubadheera. Abdullahiin (saaxilaa yakka mootummaa), dararaa hamaa mana hidhaa Ogaadeen keessatti raawwatu ragaan deeggaree maxxanseera. Hiriyoonni Joomaneeksi, miseensonni garee Biloogii Zoonii 9,waan waa’ee mirga dhala namaa barreessaniif qofa dararaan kana hinjedhamne irra gahaa ture. Akkasuma, Caalaa, walaleessaa/waloo, walaloo wa’ee ummata Oromoo irrati xiyyeeffatu waan barreessef dararaan guddaan irra gaheera. Kana malees, Zalaalam, Yonaataan fi Baahiruun, nageenya dijitaalaa irratti leenjii fudhattaniittu jedhamanii mana hidhaattidararamaa turaniiru. Bakka yaada ofii bilisaan ibsachuun hinjirretti, mootummoonni abbaa irree dararaa fayyadamuun namoota afaan qabu.
Akka qorannoon dhimma kana irratti godhame agarsiisutti, dararaan maaliif ammallee akka raawwatamaa jiru sababoota hedduutu jira. Sababni inni jalqabaa, dararri barbaachisaa dhajedhamee itti amanamuu isaati. Namoonni muraasni akka diinatti ilaalamu. Warri diina jedhaman kunneen, namoota dararaniin yakka raawwattaniittu jedhamanii gochaa sukkaneessaa dhala namummaa isaanii mulqu irratti raawwatu. Sababiin biraan, haala mana hidhaati. Bakka namni nama qunnamuu hindandeenyetti nama hidhuufi jiraachuu dhabuun tajaajila yaalaa, haala salphaa ta’een darartoonni gochaa isaanii akka raawwatan isaan gargaara. Sababni sadaffaan daraartoonni gooftolii isaanii waan sodaataniif gochaa darara sana osoo waan tokko hingaafatiin cal’isanii raawwachuu isaaniiti. Garuu immoo, sababni inni guddaan, namicha gochaa dararaa sana raawwatu: aangoo kennameefi fayyadamee darara raawwachuusaati.
Previous TVOMT:Ololaan ABO Diiguuf Yaaluun Abjuudha!
Next Seenaa Solomoon:- Oromummaan kan namni namaf latee namaara fudhaatu miti!